Zvese zvibvumirano zvedu nevatengi vedu zviri kuenderera mberi mwedzi wega wega. Kazhinji kacho isu tinoteedzera yakatarwa chirongwa uye tinenge tisingambo vimbise iwo mutsara wenguva. Izvi zvinogona kutaridza kutyisa kune vamwe asi nyaya ndeyekuti chinangwa hachifanirwe kunge chiri zuva rekuburitswa, chinofanirwa kunge chiri mhedzisiro yebhizinesi. Basa redu nderekutengera vatengi vedu mhedzisiro yebhizinesi, kwete kutora mapfupi kuita mazuva ekutanga. Sezvo Healthcare.gov iri kudzidza, ndiyo nzira inozotungamira mukukanganisa kutarisira.
Information Architecture kwete kutorwa zvakanyanya. Kazhinji, makuru masangano anozokumbira vatengesi kuti vaendese bhidha pane RFP uye vasvetuke zvachose pamusoro peRuzivo Architecture maitiro kusvetukira chaiko mukuvandudza pasina kunzwisisa kana kubvumirana pane chiyero. Ichi chikuru, chakashata, kutambisa nguva, kurasikirwa nemari, kukanganisa. Iyo yakakosha zvakanyanya kune dhizaini sezvakawanda zvekushandisa sezvaunogona kumberi uye kugadzirira kushingairira uye kugadzikana pazvinhu zvisingakwanisike kufanofungidzirwa musati watanga kuzvimisikidza (izvi zvakafanana nekuvaka imba isina mapurani). Vatengesi vakafanirwa kupererwa nebhajeti uye vanotanga kucheka makona kana izvi zvisina kuitwa nemazvo.